कथा : एक नेपाली प्लेब्वाय « Ijalas
कथा : एक नेपाली प्लेब्वाय
एउटा सुप्रसिद्ध कथामा आन्तोन चेखवले एउटा विशेष पात्रको सिर्जना गरेका छन् । गुरभ नामको त्यो विवाहित पात्र नयाँ नयाँ महिलाहरुलाई सहजताका साथ आकर्षित गर्न र उनीहरुसित शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न खप्पिस हुन्छ ।
तर महिलाहरुबारे कुनै बहस चल्यो भने उसले उत्तिकै सहजताका साथ उनीहरुको भद्दा आलोचना गर्छ । कुनै पनि महिलाबारे उसले सकारात्मक धारणा राख्दैन । हरेक नयाँ अवैध सम्बन्धपछि ऊ आफैं नैतिक रुपमा थप पतित भएको देख्दैन तर सिंगो महिला जातिप्रति उसको विद्वेष र अपहेलनाको भावचाहिं झनै बढ्दै जान्छ ।
उमेर, अन्दाजी ३५ देखि ४० वर्ष । कद, औसतभन्दा होचो । छालाको रङ, गहुँगोरोभन्दा केही अँध्यारो । गाउँमा हुर्केको मानिस झैं खँदिलो र अररिएको जस्तो लाग्ने शरीर । कपाल बीचबाट कोरेर दुईतिर लर्काएको । अनुहारबाट मुस्कान लगभग कहिल्यै नहराउने । स्वभावले अति बहिर्मुखी, एकाध घण्टा चुप लागेर बस्न नसक्ने जस्तो । बोली र हाउभाउमा गाउँले मानिसको जस्तो सहजता ।
मध्य र सुदुरपश्चिमको ठिमाहा नेपालीजस्तो लाग्ने लवज । पेशाले गाडी चालक । नेपाली गुरभको छोटो वर्णन यस्तो थियो ।
पूरा कहानीको सबैभन्दा रोचक भाग नै यही थियो । निरक्षर भएर पनि मन परेकी र डिग्री पढेकी केटी बिहे गर्नु चानचुन कुरा थिएन । उमेर कमै भए पनि भारतमा विभिन्न स्त्रीहरुसित व्यवहार गरेर उसले त्यस क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव प्रयोग गरेको थियो । केटीको घर अगाडि किराना पसल थियो, त्यहाँ गुरभ निरुद्देश्यजस्तो दिनहुँ जान्थ्यो, पछिल्लो खल्तीबाट काइँयो निकालेर कपाल कोथ्र्यो अनि घरी के, घरी के किनेर खाँदै टहलिन्थ्यो । भरे जान्थ्यो, आजका लुगा धुन्थ्यो, अनि भोलिपल्ट अर्का सफा कपडा लगाएर चुस्त भएर निस्कन्थ्यो अनि उही दैनिकी दोहोर्याउँथ्यो ।
चाउचाउदेखि चिसो पेयसम्म, पसलमा पाइने धेरैजसो कुरा किनेर खाँदाखाँदा उसको हजारौं लगानी भयो तर करीब बीस दिन जतिपछि ऊ युवतीको ध्यान तान्न सफल भयो । वार्तालाप शुरु हुनासाथै प्रश्न आयो, योग्यता र जागिरको । उसले बतायोः डिग्री सकेर भारतमा छु, अपिसमा काम गर्छु, कम्प्युटरको काम हुन्छ, (अनि महिनाको कमाई कति हुन्छ भनेको थियो, त्यो मैले बिर्सें) ।
दुखजिलो गरेर पढेकी तर बाउ बितिसकेर विपन्नताले हैरान युवतीले त्यत्तिको योग्य युवकलाई छोड्ने सम्भावना थिएन । केही दिनमै उनीहरु भागेर बिहे गरे ।
श्रीमतीलाई पहाडको आफ्नो घरमा लगेर छाडेर गुरभ फेरि बम्बइ हानियो तर जति दिन नेपाल बस्यो, त्यति दिन भयभीत भइरह्योः श्रीमतीले एक हरफ अंग्रेजी बोली भने के जवाफ दिने होला?
मेरै सामुन्ने उसले दुई महिलाहरुलाई फोन गरेर भोलिपल्ट भेट्ने फरक फरक समय मिलाउँछ, आजलाई त बाटोमै रात परिसकेको छ ।
घरमा श्रीमतीले यो फोनका रेकर्डहरु फेला पारेमा के हुन्छ भनेर म सोध्छु । उसँग जवाफ पहिल्यै तयार छः घर नपुग्दै यी दुइटै सिम बाहिर निस्किसक्छन् अनि फोनमा भोडाफोन र एअरटेलका भारतीय सिम लाग्छन् । श्रीमतीलाई फोन गर्नुपर्यो भने ल्याण्डलाइन फोन छँदैछन् ।
गुरभले सुनाउने प्रत्येक नयाँ अनुभवसँगै पात्र फेरिए पनि घटनाक्रमको चरित्र दोहोरिइरहँदा पट्यार लागिसकेको थियो । अचानक वार्तालाप फरक दिशामा मोडियो । उसले अब एकाएक उसका मालिक न्यायधीशहरुको चरित्र चित्रण गर्न थाल्यो । हुन पनि गाडी चालक भएकाले अरु कसैलाई भन्दा बढी उसलाई उनीहरुको निजी जीवनबारे थाहा थियो ।
न्यायधीशहरुलाई वयान गर्न उसले प्रयोग गरेका भद्दा र अश्लील शब्द जति कुरुप सुनिन्थे, त्योभन्दा कुरुप समाजका प्रतिष्ठित र उमेर ढल्किसकेका मानिसहरुको करतुत लाग्थ्यो । उसको बयानअनुसार न्यायधीशहरुको निवासमा बाल यौन दुराचार यति धेरै थियो कि भन्दाभन्दै ऊ आफैं दारा किटेर तिनीहरुलाई सराप्थ्यो, अनि धित मर्ने गरी आमाचकारी गाली गथ्र्यो र शान्त हुन्थ्यो ।
न्यायधीशहरुको करतुतबारे उसको बलियो धारणा थियोः तिनको अपराध कुनै पनि हालतमा क्ष्यम्य छैन ।
ऊ भन्थ्योः तिनीहरुलाई त नरकमा लगेर तेलका कराइमा उमाले पनि तिनका लागि सजायँ कमै हुन्छ । उसका यी अभिव्यक्तिहरुले मानिसको मनोविज्ञानबारे महत्वपूर्ण कुराहरु बोल्थे । समाजमा ससाना र जीविकाका लागि अपराध गर्नेहरुमा बरु गल्ती र हीनताबोध हुन्छ, केही नभए पनि तिनीहरुमध्ये कति भगवान्सित डराउँछन् । मन्दिर गएर पूजा र दान नगरे पनि हृदयमा कतै न कतै उनीहरुमा पाप–धर्मको परवाह हुन्छ । तर संगठित पाराले पद र शक्तिको पर्दाभित्र बसेर अपराध गर्नेहरुमा त्यो हुँदैन । त्यस्तै अपराधमा समेत कानुन र विवेक दुवैको प्रयोग गरेर न्याय दिनुपर्ने न्यायधीशहरुको करतुत सुनेपछि आम मानिस र खास गरी निर्धा र विपन्नहरुले न्यायालयमा पुगेर किन न्याय पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो ।
यौनेतरका विषयमा पनि गुरभको धारणा लगभग उस्तै थियो । सगोलमा रहेको परिवारका लागि कुनै ठूलो र महंगो कुरा किन्ने पनि योजना थियो उसको काठमाडौंमा ।
सहजै भन्थ्योः किन्न पैसा यति पर्छ तर म यति भन्छु, अर्थात् आफ्नै घरमा घुसखोरी वा भ्रष्टाचार गर्दै थियो ऊ । भन्थ्योः यति नगरे त कहाँ यतिका सम्बन्ध टिकाउन सकिन्छ र? हुन पनि न त बम्बइको जागिर न त नेपाल फर्केपछिको जागिरले नै उसलाई एैयासी जीवन बिताउने मौका दिने देखिन्थ्यो । भविष्यका लागि पनि त्यस्तो स्पष्ट योजना थिएन उसको । छोरो हुर्केर अब स्कुल जाने भइसकेको थियो, भाग्यवश श्रीमती जागिर खाने थिइन् । तर लाजले श्रीमतीको कमाइ कहिल्यै छुन्न भन्थ्यो, यद्यपि उसको खर्चालु बानी देख्दा त्यो कुरा त्यति पत्यारिलो लाग्दैनथ्यो ।
गुरभको कहानीले उसको आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको जुन झलक दिन्थ्यो, त्यस्तै झलक ऊ वरपरको समाजको पनि दिन्थ्यो । उसको कहानी सुन्दै गर्दा अचानक मलाई लाग्योः कतै हाम्रो समाज विवाहेतर यौन आदि विषयमा हामी धेरैले सोच्नेभन्दा बढी नै उदार भइसकेको त छैन? यदि भएकै हो भने यौनको मामलामा हामी पश्चिमा समाजहरु झैं उदार हुँदै जाने तर उता जस्तो महिलाहरुको आर्थिक प्रगति र स्वाबलम्वनचाहिं नहुँदा कतै यसले उदारता र स्वतन्त्रताका नाममा उनीहरुलाई अझ अधोगतितिर धकेलिरहेको त छैन? पढाइका लागि काठमाडौं बस्ने तर यस्तै गुरभहरुको संगतमा रहने र जीविकाका लागि तिनै गुरभहरुमा आंशिक रुपमा निर्भर रहने युवतीहरुलाई के भन्ने–
स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका भन्ने कि ज्ञान सीप सिकेर स्वाबलम्बी बन्नु पर्ने अमूल्य समय मोजमस्तमिा लागेर जीवन नै बर्बाद पारेको भन्ने? दुई कक्षा पनि पास नगरेको गुरभले ‘फिस’ भन्ने शब्द (शुल्कको अर्थमा) त्यस्तै युवतीहरुसितको मोलमोलाइका बेला पहिलोचोटि सुनेको भन्थ्यो ।
त्योभन्दा अझ माथि उठेर हेर्नुपर्दा, बुढेसकालमा पुगिसकेका न्यायधीशजस्ता मानिसहरु यौन दुव्र्यवहारमा उत्रिनुले हाम्रो समाजबारे के बोल्छ? यौनलाई बातचित र कलामा समेत अश्लील भन्दै निषेध गर्ने समयमा जन्मेर हुर्केका मानिसहरुले अहिले खुकुलिंदै गएको त्यस्तो बन्देजलाई दुरुपयोग गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।
तर कतै त्यसले उनीहरुको कार्य सम्पादनमै असर पारिरहेको त छैन? आफैं यौन हिंसामा उत्रिने मानिसले यौन हिंसाको मुद्दा अदालतमा आयो भने पीडकप्रति कृपादृष्टि राख्ला कि नराख्ला? सेना, पुलिस र गाडी चालकजस्ता केही व्यवसायहरु त बहू–विवाह बहू–सम्बन्धका लागि चिनिएकै हुन्, कतै त्यो सुचीमा अब अरु व्यवसायहरुलाई पनि थप्नुपर्ने भएको त हैन?
अन्तमा, ती शिक्षित युवती जो निरक्षर युवकसित प्रेममा परेर बिहे गरिन्, त्यस्ता युवतीहरुको नेपालमा अनुपात कति होला? भाग्यवश हामीले चर्चा गरेको गुरभलाई त भारत रहँदाको यौन–स्वच्छन्दताका क्रममा एचआइभीजस्ता रोगहरु लागेनन्, तर सबै त त्यस्ता भाग्यमानी हुँदैनन् । उसका व्यवहारबारेको वर्णन सुन्दा उसलाई अझै पनि कुनै बेला त्यस्ता सरुवा रोग लाग्ने सम्भावना थियो ।
त्यस्तो दुर्भाग्य आइलागेमा त्यसको प्रायश्चित कसरी हुन सक्छ? के त्यो पनि समाजको यौनप्रति बदलिंदो धारणाका लागि खास मानिसहरुले तिर्नुपर्ने मुल्य हैन? रोगका कुरा छोड्ने हो भने पनि गुरभमा देखिएको पत्नीव्रताको अभावलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? के उसित सम्बन्ध राख्ने अन्य महिलाहरुमा भएको पतिव्रताको अभावले उसको आफ्नो त्यो कमजोरीको क्षतिपुर्ति गर्न सक्छ?
स्पष्ट छः यस्तै असहज अवस्था नआओस् भनेर हाम्रा पुर्खाहरुले यौनलाई वैवाहिक सम्बन्धबाहिर बन्देज र निषेधको विषय बनाएका थिए ।
समाजका अन्य पुराना संरचनाहरुमा झैं अब तिनमा पनि धुलिया लागिसकेको छ । त्यसका लागि रुवाबासी गर्नु जरुरी छैन तर तिनका ठाउँमा नयाँ संरचनाहरु बन्दा हाम्रो समग्र आर्थिक समृद्धि, आम चेतना स्तर र खास गरी महिलाहरुको आर्थिक आत्मनिर्भरताको अवस्थालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
त्यसो नभएको अवस्थामा महिलाहरु अझ चर्को यौन शोषणको शिकार हुने सम्भावना हुन्छ ।